5 Qalabka lagu tijaabiyo Waxqabadka WordPress iyo Xawaaraha Goobta | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/5 Qalabka lagu tijaabiyo Waxqabadka WordPress iyo Xawaaraha Goobta
5 Qalabka lagu tijaabiyo Waxqabadka WordPress iyo Xawaaraha Goobta
Weligaa ma fadhiday oo ma sugtay degelka wax soo rarida aayar? Fursadaha ayaa ah, halkii aad sugi lahayd ilbiriqsiyo qaali ah si ay goobta u soo shubto, waxaad dooratay kuwa Back badhanka. Si kale haddii loo dhigo, internetku wuxuu ku shaqeeyaa xawli qandho, iyo haddii goobtaada aysan sii wadi karin waxaad halis u tahay inaad lumiso macaamiisha, booqdayaasha iyo macaamiisha - tani waa sababta ay muhiim u tahay in si joogto ah loo tijaabiyo waxqabadka WordPress oo aad horumar ku sameyso goobtaada.
Goobaha degdega ah waxay leeyihiin ka-qaybgal isticmaale oo wanaagsan, heerka beddelka, iyo laga yaabee xitaa darajooyinka mashiinka raadinta - waa markii aad fuuli lahayd. Maqaalkan waxaan ku sahamiyaa shan qalab oo lagu tijaabiyo waxqabadka iyo xawaaraha boggaaga WordPress, si aad maanta u sameyso isbeddelada lagama maarmaanka ah.
Waa maxay sababta boggaga WordPress uu u gaabiyaa?
Waxaa jira sababo badan oo goobtaadu u qaban karto si ka xun sidii caadiga ahayd. Xawaaraha rarida ayaa ku kala duwanaan doona goob ahaan, laakiin waxaa jira dhowr arrimood oo burburiya inta badan goobaha.
Mareegaha WordPress, the sababaha ugu badan si tartiib tartiib ah u rarista bogga waa:
bararsan / liidata koodh plugins
mawduucyada si liidata
files image weyn
martigelinta liidata (kuma habboona degelkaaga)
Hoos waxaan ku tusi doonaa sida loo hagaajiyo arrimahan caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanad ku boodin hagaajinta mareegahaaga, waxaad u baahan tahay inaad aragto sida ugu dhakhsaha badan ee uu u socdo meesha ugu horeysa.
Aaladaha ugu sarreeya ee lagu tijaabiyo waxqabadka WordPress
Qalabka soo socda ee lagu tijaabiyo waxqabadka WordPress ayaa ku siin doona sawir dhamaystiran oo ku saabsan sida uu u shaqeeyo mareegahaagu. Waxaad isticmaali kartaa hal qalab, ama waxaad u isticmaali kartaa dhammaantood si ay ula xiriiraan xogta bogga internetka ee tixraaca.
1. Fahamka Bogga ee Google
PageSpeed ​​​​Insights waa maskax ka timid Google. Appkan quruxda badan ee shabakada waxa uu cabbiraa oo tijaabi waxqabadka WordPress ee goobtaada agabyo badan, oo ay ku jiraan daalacashada miiska iyo mobaylada. Tani waa mid faa'iido leh haddii booqdayaashaadu ay ka helayaan goobtaada cabbirro shaashado iyo qalabyo kala duwan.
2. Qalabka Pingdom
Pingdom waa qalab bilaash ah oo ku siinaya macluumaadka waxqabadka goobta oo dhan oo ay ku jiraan wakhtiga rarka, cabbirka bogga, iyo sidoo kale falanqaynta faahfaahsan ee bog kasta oo ku yaal boggaaga. Waxa ugu wanagsan, abkani waxa uu kaydiyaa taariikhda waxqabadkaaga, si aad ula socoto haddi dadaalkaaga aad ku hagaajinayso wakhtiyada rarida ay shaqaynayso.
Warbixinta ay GTmetrix soo saarto waxay ku tusi doontaa taariikh dhamaystiran oo ku saabsan xawliga rarka website-ka, iyo sidoo kale warbixin tafatiran oo soo jeedinaysa siyaabaha lagu wanaajin karo waxqabadka mareegahaaga. Marka laga soo tago aaladaha falanqaynta bogga hore, aaladdan shabakada sidoo kale waxay leedahay muuqaal dib-u-ciyaarid fiidiyoow ah oo awood kuu siinaysa inaad aragto halka ay ka dhacaan ciribtirka xawaaraha rarka.
WebPagetest waxa ay ku siinaysaa xawaaraha rarka ee goobtaada iyo jabinta darajada waxqabadka goobtaada. Way gaar u tahay inay kuu ogolaato inaad doorato waddan aad ka aragto warbixintaada, si aad u aragto sida boggaagu u shaqeeyo adduunka oo dhan. Tani waa faa'iido haddii aad leedahay saldhig isticmaale oo dibadeed oo weyn.
YSlow waa plugin browser ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad la socoto waxqabadka goob kasta oo aad hadda booqanayso. Kuma siinayso wakhtiga culayska dhabta ah, laakiin waxa ay jebisaa in ka badan 20 tilmaamood oo waxqabad oo kala duwan. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad is barbar dhigto goobta tartamayaasha kale ee ku dhex jira niche si aad u aragto sida goobtaadu u taagan tahay.
Ikhtiyaarada kor loogu qaado Waxqabadka Barta WordPress
Markaad fikrad cad ka haysato sida boggaagu u shaqeeyo, waxaad bilaabi kartaa inaad hagaajiso. Hoos waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah dambiilayaasha bogga rarida gaabiska ah ee ugu caansan iyo waxaad samayn karto si aad u hagaajiso.
Martigelinta Khaaska ah
Xalka ugu jaban ee martigelinta marnaba maaha doorashada ugu fiican ee waxqabadka bogga sare. Marti gelinta ka jaban sida caadiga ah ma laha baaxadda baaxadda leh si ay wax uga qabato faahfaahin kasta oo ku saabsan boggaaga WordPress (tani waa mid ka mid ah siyaabaha ay u ilaalinayaan kharashkooda si ay kuu siiyaan qiimayaashaas hooseeya ee waalan).
Martigelinta la wadaago ayaa weli dabooli karta dhammaan baahiyaha boggaaga; Kaliya waa inaad marka hore sameyso cilmi-baaristaada. Haddii aad raadinayso adeeg martigelineed oo WordPress ah, mid ka mid ah kuwan soo socda ayaa ah xulashooyin wanaagsan:
Tixgeli inaad tirtirto Pluginsyada qaarkood
Waxay noqon kartaa mid aad u soo jiidasho leh inaad ku darto hal sifo oo kale boggaaga adigoo isticmaalaya plugin; Ka dib oo dhan, waxaa jira in ka badan 30,000 plugins oo laga heli karo Hagaha Plugin ee WordPress oo keliya.
Haddii aad ka fekereyso inaad rakibto plugin, hubi inay tayadeedu sarreeyso, maadaama plugins-ka si liidata loo calaamadeeyay ay hoos u dhigi karaan goobtaada. Markaad dooranayso plugin, hubi inay leedahay qiimeyn sare, tiro badan oo la soo dejiyo ah oo la cusboonaysiiyay dhawaan.
Hal dariiqo oo lagu arko plugins-yada saameeya waxqabadka goobtaada waa inaad isticmaasho aalad la yiraahdo Kormeeraha Query. Waxaad dhex mari kartaa plugin kasta oo ku yaal goobtaada, de-firfircoon kartaa oo dib-u-shaqayn kartaa mid kasta, marka aad samaynayso imtixaannada soo dejinta goobta - ama waxaad isticmaali kartaa plugin-kan. Pluginkani waxa uu abuuraa warbixin buuxda oo ku saabsan dhammaan weydiimaha xogta xogta ee goobtaada, kaas oo markaa lagu sifayn karo qayb si loo arko plugins-yada isticmaalaya ilahaaga. Plugin-ku waxa kale oo uu bixiyaa macluumaad ku saabsan jillaabyada la eryay, khaladaadka PHP, vars-ka weydiinta, qoraallada & qaababka, codsiyada HTTP, jihaynta, codsiyada Ajax iyo in ka badan.
Tuur Mawduucaaga Codka Liidata
Ka digtoonow in si liidata summada iyo mawduucyada tayada hooseeya ay si weyn u saameyn karaan waxqabadka boggaaga. Xataa haddii aad ku bixisay qiime sare mawduuca, tani ma dammaanad qaadayso inay yeelanayso kood tayo sare leh.
Halbeeg wanaagsan ayaa ah in la tijaabiyo mawduucaaga hadda, ama mawduuca aad ka fekereyso iibsashada, oo lid ku ah mawduuca asalka ah ee WordPress kaas oo jira ka dib rakibid cusub (iyo si aad u ogaato, dhammaan mawduucyadayada WordPress ee bilaashka ah iyo mawduucyada qaaliga ah ee halkan lagu sameeyay WPExplorer waxay isticmaashaa kood nadiif ah oo ansax ah si uu kaaga caawiyo kor u qaadida waxqabadka goobtaada, oo ay ku jirto iibinta sare ee wadarta qaabka WordPress.
Cadaadis & Hagaajin Sawirrada
Sawirada tayada sare leh ayaa muhiim u ah caawinta macluumaadkaaga iyo mareegahaaga inay soo baxaan, laakiin ha u ogolaan inay saameeyaan waxqabadka goobtaada. Waad cadaadin kartaa oo aad kor u qaadi kartaa sawirada adiga oo aan lumin tayada, taas oo ku ilaalin doonta goobtaada in ay si degdeg ah u socoto. Xirmooyinka soo socdaa waxay cadaadin doonaan wax kasta oo ku jira qaybta Maktabadda Warbaahinta ee mareegahaaga.
Dib-u-habeynta Cabbirka Warbaahinta
Qalabka Ugaarsiga Sawirka Kraken
Haddii aadan rabin inaad rakibto plugin markaas ikhtiyaar kale ayaa ah inaad isticmaasho qalabka isku-buufinta sawirka onlaynka ah, sida TinyPNG ama Kraken, ka hor inta aanad sawirka gelin goobtaada.
Isticmaal Plugin Caching
Maadaama boggaga WordPress ay tahay inay sameeyaan codsiyo xog ururin ah oo joogto ah, plugin caching ah ayaa yaraynaysa codsiyadan iyadoo la abuurayo bog HTML ah oo taagan si loo muujiyo taa beddelkeeda. Xirmooyinka kaydinta ayaa ka caawin kara goobtaada inay xakameyso xaddi badan oo taraafig ah, iyo sidoo kale cadaadin oo ay wanaajiso meelaha kale ee goobtaada. Laba ka mid ah fiilooyinka kaydinta inta badan la isticmaalo waa WP Super Cache iyo W3 Total Cache. Way adag tahay inaad mid ka doorato kan kale, markaa is-eeg oo dooro mid kasta oo ku habboon.
Dayactirka goobta oo sii socda
Haddii aad rabto in goobtaadu u ahaato mid degdeg ah markaa waxaad u baahan doontaa inaad si joogto ah u ilaaliso. Dayactirka joogtada ah ee goobtaada waxaa ka mid ah wax ka qabashada spamka faallooyinka, hagaajinta xiriirinta iyo boggaga jaban, iyo ku wanaajinta xogtaada plugin sida WP-DBManager. Tani waxay kaa caawin doontaa in waxqabadka goobtaada uu sarreeyo, si aadan u arkin hoos u dhac ku yimid goobtaada cusub ee la cusboonaysiiyay ee aad uga shaqeysay.
Gabagabada Waxqabadka WordPress
Lahaanshaha degel waxqabad sare leh oo leh xawaarihii rarida degdega ah waxay noqon doontaa oo kaliya mid aad muhiim u ah marka wakhtigu sii socdo. Nasiib wanaag, iyada oo la adeegsanayo qalab online ah oo bilaash ah iyo plugins WordPress, waxaad tijaabin kartaa waxqabadka WordPress ee goobtaada si aad u hesho meelaha dhibka leh oo aad u hagaajiso iyada oo aan shaqo badan lahayn.
Sideed uga ilaalisaa boggaga mid caato ah oo si degdeg ah u ordaya? Wax plugin ah oo sheegay in aan seegay? Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo iyaga!
Hummingbird ku horumari wax qabadka boggaga WordPress
MapSVG Plugin: Maps Interactive in WordPress